I-Cottage kwi-Main-Virginia Wine kunye neLizwe lamaHashe
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDavid & Karen
Xa iyi-234 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-Cottage eMain, eyakhiwe ekuqaleni malunga ne-1840 kutshanje iye yahlaziywa ngokupheleleyo! Hamba uye kwiivenkile zokutyela kunye neevenkile zaseThafeni okanye ujonge iidolophu zaseMarshall, Middleburg, Warrenton, Upperville ngemizuzu nje embalwa yokuqhuba. Eli gumbi lokulala elinye, igumbi lokuhlambela eli-1 elinekhitshi eligcweleyo, indawo yokuhlala kunye neyokutyela inayo yonke into oyifunayo ukubaleka ngempelaveki okanye ukuhlala okongeziweyo. Amathafa likhaya lendebe yeGolide kunye neminye iminyhadala yamahashe, ukutya okumangalisayo kunye nokuthenga kunye nelizwe lewayini laseVirginia!
Indlu yethu yasekhaya likhaya elicocekileyo, elipholileyo kwaye eliqhelekileyo lembali. Yakhelwe malunga ne-1840, isandula ukulungiswa, igcina uninzi lomtsalane wokuqala. Amabala kunye neegadi zepropathi kunye nendawo yokuhlala ephambili ziboniswe kwiMagazini yaseSouthern Living. Ibekwe ngokugqibeleleyo edolophini, inokuhamba kuzo zonke iintandokazi zasekhaya. Iindawo zokuthengisa iwayini, iivenkile ezithengisa utywala, iivenkile, iiresityu kunye nendawo emangalisayo yaseVirginia Piedmont zininzi. Kukuhamba nje okufutshane ukuya ezintabeni, emilanjeni, kumachibi, kwezinye iidolophu ezintle kunye nezixeko ezikhulu ezenza iNorthern Virginia ibe yindawo entle yokutyelela. Iithiyetha zeDC, iimyuziyam, ubomi bobusuku obudlamkileyo, inkcubeko kunye nembali ingaphantsi kweyure yokuqhuba. Ngena kwiTysons Corner nakwezinye iindawo ezisemantla eVirginia kwindawo yokutyela ekumgangatho wehlabathi kunye nokuthenga ngexesha elincinci! Ilungele indawo yokuhlala yeendwendwe zomtshato, impelaveki yesithandwa, indawo yokuthengisa utywala, ivenkile ethengisa utywala kunye nokhenketho lwempelaveki, iminyhadala yamahashe, iimpelaveki ezinde & nohambo lwendlela, imisitho yebhayisekile okanye ukubaleka nje yonke imihla. Siyathemba ukuba uya kukonwabela ukuhlala kwakho kwaye ubuye kwakhona kwaye kwakhona.
I-wifi ekhawulezayo – i-234 Mbps
Amathafa yidolophu encinci egcwele abantu abamangalisayo kunye neendawo zokutyelela. Kukho into eninzi yokwenza apha edolophini nakwilizwe jikelele. Abantu abathanda amahashe, abathandi bewayini, abakhweli beebhayisikile kunye nabo bafuna nje ukumka kwindawo ephithizelayo yendawo yemetro baya kuyifumana iyindawo enoxolo neyonwabileyo yokundwendwela.
Ukuba kukho nayiphi na imiba, sikufutshane kwaye sikulungele ukunceda.